Runtii ma "Xikmaddii Dadka"? | Martech Zone
Axad, Maarso 18, 2007 Talaado, Oktoobar 4, 2011 Douglas Karr
“Xikmadda dadka” waxay umuuqataa ereygan sixirka ah ee Webka 2.0 iyo Isha Furan. Haddii aad Google ereyga, waxaa jira qiyaastii 1.2 milyan natiijooyin, oo ay ku jiraan Wikipedia, bilig bilig, Mavericks Shaqada, Starfish iyo caaro, Wikinomics, IWM
Runtii ma Xikmaddii Dadka?
IMHO, Sidaas ma aaminsani. Waxaan aaminsanahay inay ka badan tahay ciyaar tirakoob iyo macquulnimo. Internetku wuxuu noo soo bandhigay hab aan si hufan ugula xiriiri karno midba midka kale emayl, makiinado raadin, baloogyo, wikis iyo mashruucyo furan. Adoo ereyga u gaarsiiya malaayiin, runti kama dhigaysid xigmadda malaayiin. Waxaad si fudud macluumaadka ugu keenaysaa qaar ka mid ah akhyaarta caqliga leh ee malyankaas ah.
Haddii fursadahayga aan ku guuleysto $ 1 milyan bakhtiyaa-nasiibka ay ahaan lahayd 1 ka mid ah 6.5 milyan, waxaan iibsan karaa mid kasta oo ka mid ah 6.5 milyan tikidhada oo aan guuleysan karaa. Si kastaba ha noqotee, waxaan kaliya ku guuleystey tikit 1! Xikmad ma ahayn in la iibsado 6.5 milyan tikidhada… taas oo ahayd mid carrab la 'tan iyo markii aan ku waayey $ 5.5 milyan heshiiska, miyaanay ahayn? Ku ridida macluumaadka shabakada malaayiin lacag ah, in kastoo - mararka qaar waa bilaash ama ugu badnaan dhowr senti.
Waxaan u arkaa faallooyinka boggeyga inay la mid yihiin… waxay ku darayaan qodobo cajiib ah boostada. Runtii waan jecelahay faallooyinka - waxay helayaan wada hadalka oo waxay siinayaan taageero ama diidmo barta aan isku dayayo. Si kastaba ha noqotee, 100kii qof ee akhriya balooggayga, kaliya 1 ama 2 ayaa runtii qora faallo. Taas macnaheedu maaha in akhristayaasha kale aysan fiicnayn (ka dib oo dhan, waxay akhrinayaan balooggaygu saw maaha?;)). Kaliya waxay ka dhigan tahay in Xikmada Dadka marka la eego waxa ku jira waxa kaliya u sabab ah akhristayaal kooban.
Mise waa Caqliga Gaaritaanka Dadka?
Markaan inbadan gaaro, in kastoo, aan awoodo inaan soo qabto kuwaas akhristayaasha ah. Waxaa laga yaabaa inaysan ahayn Xikmada Dadka, runtii waa Caqliga Gaaritaanka Dadka.
Ku dhis waddo Google Earth
Waxaa laga yaabaa inay tahay nooc la mid ah xaraashka, halkaas oo qiimaha ugu dambeeya ay ku socdaan dalabyo isdaba jooga ah. Markan oo kale qaybta sirdoonka waxaa wada wada mufakiriin is xigxigay - "Sida birtu u afayso birta, ayaa qofna u afeeyaa caqliga qof kale." (Maahmaahyadii 27:17)
Taasi waa xagal xiiso leh oo tan ku saabsan oo aanan ka fikirin. Waxaan jeclahay tixraaca Maahmaahda sidoo kale. Mahadsanid, Christine!
"Ma waxaad si fudud macluumaadka ugu keenaysaa qaar ka mid ah dadka caqliga badan ee malyankaas ah"
Taas bedelkeeda, inta soo hartay waxay soo xushaan runta badhkeed iyo hoos u dhigta beenta saxda ah, oo iyaduna dib ugu noqoshada macluumaadka kuwa kale. Waan uga mahadcelin karnaa baloogyada iyo fagaarayaasha midaan 😉
Dhinaca kale, ka dib markii aan ka tagay boggaaga, waxaan booqday bogga fikradaha ee joornaalka maxalliga ah iyo baloog kale. Aad ugama qanacsana doodahaas qaar ka mid ah oo ku saabsan arrimaha saxda ah ee siyaasadeed. Waxaan dhihi lahaa badanaa waxay u maraan dhanka kale.